South Asia and Beyond: लोकमानको फाइल हराएको कि हाम्रा नेताहरुको लगौंटी?
लोकमानको फाइल हराएको कि हाम्रा नेताहरुको लगौंटी?
आफू पदस्थ संवैधानिक निकायको हैसियत नै निर्मम समानान्तर सरकारको जस्तो बनाएका अदुअआप्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको सम्भावित बहिर्गमनका उपायहरुमध्ये न्यायालयले उनको नियुक्ति र योग्यता आदिका विषयमा गर्ने अनुसन्धान र फैसलालाई एक ठहर्याइँदै आएको थियो ।
सम्भवतः यही भयले लोकमानले न्यायालयसँग केटौले पाराका विवाद झिकेर उसलाई बदनाम बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
न्यायालयले मान हानिको मुद्दामा बोलाउँदा एक महिनासम्म म्याद नबुझेर उनले आफू संविधानभन्दा माथिको व्यक्ति भएको सन्देश दिने प्रयाससमेत गरिसकेका छन् ।
यही पृष्ठभुमिमा कर्मचारी रहँदा उनको भुमिका, अदुअआमा उनको नियुक्ति र त्यसका लागि उनको योग्यतासंग सम्बन्धित फाइलहरु हराएको भनेर सरकारले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएपछि त्यसले केही गम्भीर प्रश्नहरु जन्माएको छ ।
के ती फाइल हराएकै हुन्? वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई ती फाइल नष्ट गरेर हराएको चिठी लेख्न निर्देशन दिइएको हो?
त्यस्तो निर्देशन दिएको भए त्यो स्वयं प्रम प्रचण्डले दिए कि अरु कसैले?
हराएकै हुन् भने बाँकी कुन कुन फाइल हराएका थिए?
फाइल हराएकै कारण कसैले न्यायालयको सामना गर्नु नपर्ने वा न्यायालयसामू कुनै दुष्कर्मका लागि जिम्मेवार हुनु नपर्ने हो भने भोलिदेखि नियमित फाइल हराउन थाले भने के हुन्छ?
भोलि अख्तियारले कुनै निकायबाट फाइल मगाउँदा दिन मन नलागेको फाइल भुकम्पले वा वर्षाले वा खडेरीले वा धमिराले वा अरु केहीले नष्ट गर्यो भनेर जवाफ पठाउन अनि कारवाहीबाट बच्न पाइन्छ कि पाइँदैन?
देशमा यति तमाशा हुँदा पनि र नागरिकहरु यति उत्तेजित र उद्विग्न हुँदा पनि किन राजनीतिक कित्ता चुप छ? किन उसको मुखमा ताला लागेको छ?
लोकमानविरुद्ध दर्जन बढी गम्भीर आरोपहरु प्रमाणसहित पेश गर्दासमेत देशको सार्वभौम भनिएको संसद त्यो विषयमा सामान्य छलफल चलाउन समेत डराउनु अनि यता राज्यले सुरक्षित राख्नुपर्ने संवेदनशील फाइल नै हराएको भनिनुबीच कतै तारतम्य त छैन?
उत्तर सरल छ । एकचोटि नांगिदा लाज हुन्छ । बारम्बार नांगिइरहँदा लाज हराउँछ । कुरीकुरी गर्नेहरु थाक्छन् । सबै नांगा राजनीतिज्ञ हेरेरै हुर्केका बालबालिकाले राजनीतिज्ञ हुन नांगो हुनुपर्नेरहेछ भनेर सिक्छन् र सामान्य मान्छन् ।
लोकमानको मामलामा नेपालका राजनीतिज्ञहरु सर्वांग नांगिएको लोकमानले सयौं नेता र कर्मचारीमाथि राष्ट्रिय अनुसंधान विभाग लगाएर अवैध जासुसी गरेको भन्ने समाचार आएदेखि नै हो । त्यस बेला देखिएको लाचारी अब झन झांगिदै गएको देखिन्छ।
श्रोत: नेपाल साप्ताहिक
त्यसमा नेताहरुको अकर्मण्यताको अर्थ लोकमानले यसरी लगाएः ख्वामित, जे गरे पनि गर्नुस्, यहाँको कृपा भए मलाई चाहिं मुद्दा नचलाइदिनुहोला वा चलेको अनुसन्धानलाई तामेलीमा पठाइदिनुहोला । त्यसबापत जे गर्नुहुन्छ, भोग्न तयार छु । सिआइबी मात्र हैन, पूरा प्रहरीलाई आफ्नो अंग बनाउनोस्, अर्बौंको सार्वजनिक जग्गा आसेपासेका नाममा पास गराउनोस्, मेरा प्रतिस्पर्धी वा विरोधीलाई मुद्दा लगाएर जाक्नुस्, तपाइँका आफ्ना विरोधीलाई सिध्याउनोस्, यो संविधानको धज्जी उडाएर शासन सत्ताका सबै अंगमा नियन्त्रण गर्नोस्, देशमा आतंक फैलाउनोस्, खाली मलाई मात्र कृपा गरिदिनोस् ।
यसरी लगौंटीविहीन भएको राजनीतिक नेतृत्व अहिलेको प्रकरणपछि पनि मौन बस्न अभिशप्त छ ।
तर तपाइँ हामी अझै त्यसरी अभिशप्त छैनौं, त्यसैले आउनोस्, विना लगौंटी दाँत ङिच्याएर किनारामा उभिरहेका राजनीतिज्ञहरुलाई कुरीकुरी गर्दै भनौंः हिजो तिमीले नसक्दा ०६२–०६३ मा सडकलाई जगाएको हामीले हो, अब पनि हामीले नै जगाउने छौं ।
रुनु न हाँस्नु बनायो पिरतीले.....!
सरकारले अदालतलाई भन्यो- लोकमान नियुक्तिको फाइल भूकम्पमा ‘हरायो’ https://t.co/bXfgPEakST via @setopati
— Ameet Dhakal (@ameetdhakal) September 14, 2016
सक्कली फाइल भए त सहजै अदालतसामु प्रस्तुत हुन्थ्यो, नक्कलीमा ‘भूकम्प’को आवरण लगाउनुपर्नेभयो । उहिले नै भन्थे, ‘अजब देश... ।’ सरम नभएपछि...
— Hari Bahadur Thapa (@Haribthapa) September 14, 2016
हतियार खोलाले बगाउने
मोदीसँग केमेस्ट्री मिल्ने
लोकमान सरको फाइल भूकम्पमा हराउने
बाख्रा हरायो । ~~~
— CP Aryal (@CPAryal) September 14, 2016
पुकदाले युद्ध लडेका धेरै बन्दुक ‘खोलाले बगाइदियो’, लोकमानका फाइल भूकम्पमा ‘सिंहदरबारबाटै हराए’ रे । पुकदा सिंहदरबारमै हुँदा यस्तो ! :)
— Rameshwar Bohara (@rambohara) September 14, 2016
सरकारः लोकमान नियुक्तिको फाइल भूकम्पमा ‘हरायो’ ।
फलानोः दिल्ली पुगेर देश भूकम्पमा ‘हरायो’ चैं नभनिदिबक्सेला ।
— PHALANO™ (@phalano) September 14, 2016
नियुक्तिको फाइल पनि भुकम्पले मेटेको रैछ भने ख्वामितको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ? फाइल हरायो भनेर न्याय टाल्न पाइन्छ?https://t.co/MxWlMWMs0M
— Jiwan Kshetry (@jkshetry) September 14, 2016
संसदमा बोलाउँदा घाँटी दुख्यो, सर्वोच्चमा जवाफ दिन महिना दिन लाग्यो-अब फाइल माग्दा त्यो छैन। यो कस्तो लाछी गणतन्त्र हो? #ImpeachLokman #Shame
नेतृत्वगण बोल्नै नसक्ने गरी अशक्त/बुझ्नै नसक्ने गरी विक्षिप्त भएको हो भने खूलस्त भनौं-जनता सडकमा आउँछन्, ४६ मा ०६२ मा आएकै हो#ImpeachLokman
Posted by Jiwan Kshetry at 7:55 PM